Blog of lwamwaynaing / Бесплатный видео чат Conferendo
Blog of lwamwaynaing
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ဖိုဒါတွေကို လုံလုံခြုံခြုံလေးသိမ်းချင်သူများ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီကောင်းလေးက သူကိုဝင်တဲ့ အခါမှာအရင်ဆုံး Password ပေးပြီးဝင်ရပါတယ်..ပြီးမှမိမိတို့ လော့ချထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဖျောက်ထားချင်တဲ့ ဖိုဒါကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးပေးပြီး ထည့်ပေးထားယုံပါပဲ..ဖိုဒါကို လော့ထားယုံပဲထားမှာလား ၊ ဒါမှ မဟုတ်လော့ချပြီးတော့ ဖျောက်ထားမှာလား ၊ လော့တော့ချမထားဘူး ဖျောက်ပဲထားမှာလား ဆိုတာကိုတော့မိ မိတို့စိတ်ကြိုက် ရွေးလို့ရပါတယ်..ပြီးတော့ သုံးရတာလဲပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်. အရင်ဆုံး Secure Folder 5.3.0.0 လေးကိုမိမိတို့ရဲ့စက်မှာ Install လုပ်လိုက်ပါ..Secure Folder 5.3.0.0 လေးကို Install လုပ်ပြီးရင် Secure Folder 5.3.0.0 လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင်သူက Username နဲ့ Password ထည့်ခိုင်း ပါလိမ့်မယ်..မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် username နဲ့ password ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ.. Password လေးကိုတော့မှတ်ထား ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုတက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ပုံစံလေးတွေနဲ့တင်ပြချင်ပေမဲ့နေရာရဲ့ အခက်အခဲကြောင့်ပုံစံနဲ့မပြနိုင်တာကိုနားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ပုံစံနဲ့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာလင့်
လေးတွေပေးထားလိုက်ပါမယ်။ပုံစံပါသောpdf ဖိုင်နဲ့မူလပို့စ်တ်စာအုပ်ရယ် .ဆော့ဝဲဒေါင်းဘို့ရန်ဆိုပြီးလင့်နှစ်ခုပေးထား
ပညာနဲ့အိပ်တစ်ခါတုန်းကရွာတစ်ရွာမှာအလွန်းရိုးအသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အလွန်ရိုးသားသောအမျိုးသားတစ်ယောက်တို့အိမ်ထောင်ပြုနေထိုင်ပါသတဲ့တစ်နေ့တော့ယောက်ကျားကတစ်ရွာတစ်ကျေးအရပ်ဝေးမှာအလုပ်သွားခါနီးသူမိန်းမကိုအခုလိုမှာထားခဲ့လေသတဲ့''ငါခရီးသွားတုန်းငါမရှိတဲ့အချိန်မှာပညာနဲ့အိပ်ပါ။ပညာနဲ့စားပါ။ပညာနဲ့သွားပါ''လို့ပြောပြီးခရီးထွက်သွားပါသတဲ့။ဒီတော့မိန်းမတွေးလိုက်တာက ပညာနဲ့အိပ်ဆိုတော့ ပညာပါတဲ့သူဆိုလို့ရွာလယ်ကလူပျိုကြီးဦပညာပဲရှိတယ် သူနဲ့အိပ်ဖို့မှာခဲ့တာပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်သတဲ့ ဒါနဲ့ သူနဲ့ကျမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုသလိုဒီရွာမှာကလည်းဦးပညာဟုအမည်နာမရှိသောလူပျိုကြီးတစ်ယောက်ရှိလေတော့ လူပျိုကြီးဆိုတာကြောင်ခံတွင်းပျက်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်လေဒီတော့မိန်းမလည်းသူယောက်ကျားမှားထားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန်မှာ လူပျိုကြီးဦးပညာနဲ့သွားအိပ်ပါသတဲ့ လူပျိုကြီးဦးပညာနဲ့အတူတူအိပ်စားသွာလာနေထိုင်လာလိုက်တာ သူ့ယောက်ျားလည်းပြန်လာရော ကလေးတစ်ယောက်ပိုက်လျက်တွေ့တော့ ဟေ့ ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟုမေးရာသူမိန်းမဖြေလိုက်ပုံက''ရှင်ပဲပညာနဲ့အိပ် ပညာနဲ့စား ပညာနဲ့သွားဆိုလို့ လူပျိုကြီးဦးပညာနဲ့သွားအိပ်တာ အခုလိုဖြစ်လာတာပဲတော်ရေ့ဒါတောင်ရှင်ပြန်လာတာမြန်လို့ ဒါ့မို့ဆို''တဲ့ဗျာ။မှာရင်အပြည့်အစုံမှာကြနော် တော်ကြာ...............................................................................မြန်မာ ဟာသ လေးတွေပါ ..... ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး ============================(၁) သေပြီဆရာရွာတစ်ရွာမှာရှိတဲ့ ဦးလေးကြီး လင်မယား ( ၂ ) ယောက်မှာ သမီး ( ၇ )ယောက်ရှိတယ်တဲ့။အချိန်တန်တော့ သမီးတွေကို အိမ်ထောင်ချပေးတော့ပထမဆုံးသမီးက ထန်းတစ်ပင် ရွာသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကြတယ်။ကလေး တစ်ယောက်မွေးတယ်။ဒုတိယသမီးက ညောင်နှစ်ပင် ရွာသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကြတယ်။သူက ကလေး နှစ်ယောက်မွေးတယ်။တတိယသမီးက သုံးဂွ ရွာသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကြတယ်။ကလေး သုံးယောက်မွေးတယ်။လေးယောက်မြောက် သမီးက လေးမျက်နှာ ဘုရားဘက်က ရွာသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကြတယ်။ကလေး လေးယောက်မွေးတယ်။ငါးယောက်မြောက် ငါးဇွန်ဘက်က ရွာသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကြတယ်။သူတို့ကြတော့ ကလေး ငါးယောက်မွေးတယ်။ခြောက်ယောက်မြောက် ချောက် ( ခြောက် ) ရွာသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကြတယ်။သူတို့က ကလေး ခြောက်ယောက်မွေးတယ်။ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ခုနှစ်ယောက်မြောက် သမီးလေးက သူ့အဖေကိုပြောတယ် ။ အဖေ...သမီးမှာ ရည်းစား ရှိနေပြီတဲ့။ သမီးလက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ ၊ အဖေက သူ့သားမက်ကို အိမ်ကို ခေါ်ခဲ့ပါဦး သူကြည့်ရအောင်တဲ့။ ဒါနဲ့ သမီးလည်း ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ခေါ်လာတဲ့ အခါ သူ့အဖေက မင်းက ငါ့သမီးကို လက်ထပ်ချင်တာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ မင်းက ဘယ်နယ်ကလဲကွဆိုတော့ သားမက်လောင်း ပြောလိုက်တာကကျွန်တော်က " သုံးဆယ် " ကပါလည်းဆိုရော ကောင်မလေးအဖေ ပါးစပ်က ဟေ....................=================================( ၂) မလွဲသောအမှားအလုပ်တစ်နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးရာ လူငယ်တစ်ဦးအလှည့်သို့ရောက်လာ၏။ရွေးချယ်သူ ။ မင်းနာမည်လူငယ် ။ မောင်လှရွေးချယ်သူ ။ အထက်လူကြီးက မေးရင် " ဆရာ " ထည့်ဖြေရတယ်ကွ။ ပြန်ပြောလူငယ် ။ ဟုတ်ကဲ့ " ဆရာမောင်လှ "=====================================( ၃ ) ဖြစ်ရမယ်မျက်နှာမသာမယာဖြင့် ကိုချူချာ အိမ်ပြန်ရောက်လာသည်။ဦးလေးဖြစ်သူက ။ ဘာဖြစ်လာတာလဲ ချူချာချူချာ ။ ရေးကူးသင်တန်းက ထုတ်ခံရလို့ဗျဦးလေး ။ ဘာဖြစ်လို့လဲကွချူချာ ။ ရေကန်ထဲ ရှုးပေါက်မိလို့ဗျဦးလေး ။ ဟေ...သူများတွေလည်း ဒီလိုပဲ မသိမသာလေး ပေါက်နေကြတာလေချူချာ ။ အဟီး......ကျွန်တော်က ဒိုင်ဗင်စင်ပေါ်ကနေ တက်ပေါက်မိလို့ပါ====================================( ၄ ) ပါတော့ ပါသွားတယ်ကျောင်းတက်ချိန် နောက်ကျမှ ကျောင်းသို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ရောက်လာ၏။ ထိုအခါ အလွန်စိုးရိမ်တက်သော ဆရာကဆရာ ။ ဘာဖြစ်လို့ကျောင်းနောက်ကျတာလဲကျောင်းသား ။ လမ်းမှာ ရိုက်လုတာ ခံရလို့ပါ ဆရာဆရာ ။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေကွာ.....ဒါနဲ့ ဘာတွေများ ပါသွားသေးလဲကျောင်းသား ။ ကျွန်တော့် အိမ်စာတွေတော့ ပါသွားတယ် ဆရာ=================================( ၅ ) မှတ်သားလောက်တယ်သူငယ်ချင်း မင်း.....ဘယ်မြို့ကမယ် ၊ ဘယ်တိုင်းကမယ် ၊ မယ်ဗမာ ၊ မယ်ကမ္ဘာတို့ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လားအေး...ကြားဖူးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲငါမနေ့က လမ်းမှာ ကောင်မလေးချောချောတွေ့လို့ စကားလိုက်ပြောရင်းနဲ့ နာမည်မေးလိုက်တော့သူဘာမယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်ကွ။ မင်း..သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လားကွ...." ဘာမယ်တဲ့တုန်း "" ပါးကျိုးမယ် " တဲ့================================( ၆ ) မဖြစ်နိင်ဘူးစာအုပ်ဆိုင် အတွင်းသို့ လူငယ်တစ်ယောက် ၀င်လာပြီး အရောင်းဝန်ထမ်းအား မေးသည်။လူငယ် ။ စာအုပ်လိုချင်လို့ဗျာဝန်ထမ်း ။ ဟုတ်ကဲ့....ဘာစာအုပ်များလဲ ရှင်လူငယ် ။ နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ စာအုပ်ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာက " ယောင်္ကျားတွေဟာ မိန်းမတွေအပေါ် ဘယ်လို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားသလဲ " ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါဝန်ထမ်း ။ ဒါဆို ညာဘက်တန်းက " စိတ်ကူးယဉ် စာပေများ " ဆိုတဲ့ စင်မှာ ရှာကြည့်ပါရှင်==================================မှတ်ပြီလားတစ်နေ့ လူတစ်ယောက်နေမကောင်းဖြစ်သဖြင့် ဆရာဝန်ထံသွားပြရာ......ဆရာဝန်- ခင်ဗျားကဘာဖြစ်တာလဲလူနာ - ကျနော် ကိုယ်လက်မအီမသာနဲ့ အားပြတ်နေသလိုပဲဗျာ။ဆရာဝန်- အင်း..ခင်ဗျားအစားကိုမှန်မှန်စားဗျာ၊ အဆီအဆိမ့်ကိုလျှော့စားအသီးအနှံ တွေများများစားပေးဗျ။ အသီးအနှံစားရင်လဲအခွံတွေကိုချန်မထားနဲ့ဗျ၊ အခွံတွေကလဲအားရှိတယ်ဒါနဲ့ ခင်ဗျားဘာသီးအကြိုက်ဆုံးလဲဗျ။ထိုအခါ လူနာဖြေလိုက်သောအဖြေကြောင့် ဆရာဝန်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားလေသည်။လူနာပြောလိုက်သည်မှာကား....လူနာ - အုန်းသီး။=================================သူဘယ်မှာလဲ....ကိုလှ - ဟေး ကိုမြ၊ ခင်ဗျားမျက်နှာကလဲဗျာ၊ ရှုံ့မဲ့နေတာပဲဘာဖြစ်နေတာလဲဗျ။ကိုမြ - သွားကိုက်လို့ပါဗျာ။ သွားဆရာဝန်ကောင်းကောင်းတစ်ယောက်လောက်ခင်ဗျားသိလား။နှုတ်ပစ်မလို့ အဲဒီသွားကို။ကိုလှ - ဟာ.နှုတ်ပစ်စရာမလိုပါဘူးဗျာ။ ကျနော့လိုလုပ်ပါလား။ဟိုနေ့ကကျနော်လဲသွားကိုက်တာ၊ အဲဒါကျနော့မိန်းမကိုခေါ်ပြီးနှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ပြီးနမ်းလိုက်တာ ကောင်းသွားရောဗျ။ခင်ဗျားလည်းစမ်းကြည့်ပါလား။ကိုမြ - ဟာ...အဲဒါဆိုမဆိုးဘူးဗျ။ ကျနော်စမ်းကြည့်မယ်ဗျာ။ဘယ်မှာလဲ ခင်ဗျားမိန်းမ။============================သိနားလည်မှု" မင်းတို့အထဲမှာ စန္ဒရားအကြောင်း ကောင်းကောင်း သိတဲ့သူ ပါသလားကွ "" ပါပါတယ် ဆရာ၊ ကျွန်တော် စန္ဒရား တီးတက်ပါတယ် ။ စန္ဒရားအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ခင်ဗျာ "" ဒါဆို ဒီစန္ဒရားကို ကားပေါ်တင်တဲ့အခါ မင်းက ဦးဆောင်ပြီး ဂရုစိုက် တင်ပေးစမ်းပါကွာ "======================================သူ မှာထားခဲ့လို့" ညကြီးမင်းကြီး ခြေအိတ်ကို ခေါင်းမှာပတ်ပြီး ဘာထွက်လုပ်နေတာလဲ "" ကျွန်မ ယောင်္ကျားက မှာထားလို့ပါ။ သူခရီသွားနေတုန်း ညဘက် အပြင်ထွက်ရင် လူရမ်းကားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ခြေအိတ်အထက်ပိုင်းကို မထိစေနဲ့ဆိုလို့ "========================================နားလေးသူမို့ပါ" ခုနက စတိတ်ရှိုးပေါ်မှာ အသံပြဲကြီးနဲ့ ဟဲဗီးသီချင်းဆိုသွားတာ ခင်ဗျား မဟုတ်လား "" ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်က တက်သစ်စ အဆိုတော်ပါ "" ဒါဆို တဆိတ် ကူညီစမ်းပါဗျာ။ ပွဲခင်းထဲမှာ ကျုပ်မိန်းမနဲ့ လူချင်းကွဲသွားလို့ ခပ်ကျယ်ကျယ် အော်ပေးစမ်းပါ။သူက နားနည်းနည်းလေးတယ် "======================================အပူကိုယ်စားလှယ်" အခုတလော ကျုပ်မှာ ပူပင်စရာတွေများလွန်းလို့ ကျုပ်အစား ပူပေးမယ့်သူရှိရှင် ငွေတစ်သိန်း ပေးလိုက်ချင်ပါရဲ့ဗျာ "" ကိုင်း.......ဒါဆို ကျုပ် ပူပေးပါ့မယ် ၊ ငွေတစ်သိန်းသာ မစပါ "" အဲဒါ ပထမဆုံး အနေနဲ့ ခင်ဗျားပူရမယ့် အပူပဲ "===========================မေမေ့ တာဝန်ထားလိုက်" အဲဒီလူနဲ့ သမီး လက်မထပ်ချင်ဘူး မေမေ ၊ သူနဲ့သမီးနဲ့ အယူအဆချင်း မတူကြဘူး။ သူက ငရဲရှိတယ် ဆိုတာကို မယုံဘူးလို့ အကြောက်အကန် ပြောတယ် မေမေရဲ့ "" လက်ထပ်မှာသာ ထပ်လိုက်ပါ သမီးရယ် ၊ ငရဲ တကယ်ရှိကြောင်း သိအောင်လုပ်ဖို့ မေမေ့တာဝန် ထားလိုက်စမ်းပါ "==================================အချစ်အတွက်ဆိုရင်" အချစ်အတွက်ဆိုရင် ဘာပဲ လုပ်ရလုပ်ရ ၊ ဘာနဲ့မှ မလဲနိင်ဘူး ။ အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ရဲတယ်ဘယ်အရာမှ လာပြီး တားလို့ မရဘူးကွ "" ကဲပါ ယုံပါပြီ ရှင်ရယ် ၊ ဒီညနေ ရုပ်ရှင်လိုက်ပြဖို့ ချိန်းထားတာလည်း မေ့မနေနဲ့ဦးနော် "" စိတ်ချ စိတ်ချ ဖဲဝိုင်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဆက်ဆက် လာခေါ်မယ် စောင့်နေ "=====================================နည်းနည်းစောင့်ပါပထ၀ီဝင်ဆရာမ - " ရှမ်းကုန်းပြင်မြင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မင်းတို့သိသမျှ ပြောပြစမ်းကွာ "တပည့် - " လောလောဆယ်တော့ ဘာမှ မသိသေးပါဘူး ခင်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ သိသိချင်း ပြောပြပါ့မယ် "=====================================ဆိုမှဆိုတက်ပဲဟာ" ရုပ်ရှင်ညပွဲပြီးလို့ သမီး အိမ်ပြန်လာတော့ လမ်းထိပ်မှာ အရက်မူးသမား အုပ်စုနဲ့ တွေ့တယ် မေမေ။ သူတို့က သမီးကို သီချင်းဆိုခိုင်းတယ် ။ မဆိုပြရင် ဖက်နမ်းရလိမ့်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ကြတယ် မေမေ "" အဲဒီတော့ သမီးက ဆိုပြလိုက်တယ်ပေ့ါ "" ဟွန့် မေမေ သိသားနဲ့ သမီးမှ မဆိုတက်တဲ့ဟာ "================================အမွေဆက်ခံမိလို့" ခင်ဗျား မသေသင့်ဘူးဗျ။ ဟုတ်တယ် ၊ တကယ်ဆို ခင်ဗျား မသေသင့်သေးဘူး "" ဟေ့လူ မူးမူးနဲ့ အုတ်ဂူရှေ့မှာ ငိုပြီး ခင်ဗျားရဲ့ အခင်ဆုံး မိတ်ဆွေမို့လို့လား "" ဟင့်အင်း..ကျွှန်တော့်မိန်းမရဲ့ ပထမ ယောင်္ကျားပါ "====================================ရေတွက်ပုံချင်းမတူ" စိတ်ဆိုးမယ်ကြံတိုင်း တစ်၊ နစ်၊ သုံး၊ လေး၊ တစ်ဆယ်ထိရေပါလို့ သားကိုပြောထားသားနဲ့၊ အခု ရန်ဖြစ်လာပြန်ပြီလား "" အဲဒီလို ရေမိလို့ အခုလို အထိုးခံရတာပေ့ါ "" ဘာဖြစ်လို့လဲကွ "" ဟိုကောင့် အမေက သူ့သားကို ငါးအထိပဲ ရေခိုင်းထားတာ အဖေရဲ့ "
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ. ဒီတစ်ခါတော့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်အကြောင်း နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်. လက်ရှိရေးနေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေအတွက်တော့ ဒီပို့စ်လေးက နှမ်းဖြူးသလို ဘာမှမပြောပလောက်ပေမယ့် အခုမှ စရေးမယ့် ဘလော့ဂါအသစ်လေးတွေ၊ လူကြီးတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဆီကို တစ်ချို့ အီးမေးလ်ပို့ပါတယ်. ဇော်ဂျီမှာ ပါဠိပါဋ္ဌ်ဆင့်တွေ ဘယ်လိုရိုက်ရလဲ မသိလို့ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်တဲ့. ဒါတင်မကသေးပါဘူး. တစ်ချို့သော ဘလော့ဂ်တွေကို လိုက်ကြည့်မိတော့ သူတို့တွေ ပါဠိပါဋ္ဌ်ဆင့်တွေကို မှန်ကန်အောင် မရိုက်ယူနိုင်တာတွေ တွေ့နေရပါတယ်. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ စကားပလ္လင်ခံလိုပါတယ် ခင်ဗျာ. ကဲ. စလိုက်ကြရအောင်နော်. ဒါက ဇော်ဂျီလက်ကွက်ပါ. ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပါတယ်. ဇော်ဂျီလက်ကွက်မှာ အင်္ဂလိပ်နဲ့ မြန်မာကို တွဲရိုက်လို့သိပ်လွယ်ကူပါတယ်. Ctrl+Shift နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မြန်မာစာကို အလွယ်တကူ Switch လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်. “~” ဆိုတဲ့ လက်ဝဲဖက်အပေါ်ဆုံးက Key လေးကို ဇော်ဂျီမှာ Tide Key လို့ခေါ်ပါတယ်. အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ Key လေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတာ နောက်ဆက်ဖတ်ရင် သိလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ. ဇော်ဂျီကီးဘုတ်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ Key တစ်ခုတည်းမှာ စာလုံး လေးလုံးမြှုပ်နှံထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ခြားသော Unicode System တွေမှာဆိုရင်တော့ ပါဋ္ဌ်ဆင့်တွေ ရိုက်ယူဖို့ Alt+1234 စတဲ့ နံပါတ်တွေ ရိုက်ယူရတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်. အဲဒါတွေကို အလွတ်သိအောင် မှတ်ယူရတာ (သို့) ကီးဘုတ် Layout ကို တစ်ချိန်လုံး ဆောင်ထားရတာမျိုးတွေကို ဇော်ဂျီ ယူနီကုဒ်စနစ်က ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်. Compact ဖြစ်တဲ့ Unicode System တစ်ခု ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ဥပမာလေးတွေနဲ့ စပြီး စမ်းရိုက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား… ရှင်မဟာ ရဋ္ဌသာရ ရေးသားတော်မူတဲ့ စတုဓမ္မသာရ ကိုးခန်းပျို့ထဲက ကောက်နုတ်ချက်လေးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်. “ဧသုကာရီ၊ ကျော်ညီသတင်း၊ ထိုသည်မင်းနှင့်၊ ရောင်းရင်းတူကွ၊ ငယ်သော်ကလျှင်၊ ပိယသဟာ၊ မေတ္တာကျွန်းမ၀င်၊ တိုင်ပင်ကြသော်၊ ချစ်မွေ့လျော်သား…” Shift ခံ၍ရိုက်နည်း. အဲဒီ့စာပိုဒ်လေးကို ရိုက်မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး “ဧ” ဆိုတာကို ရိုက်ဖို့အတွက် လိုက်ကြည့်တော့ [ ဆိုတဲ့ Key လေးရဲ့ အပေါ်မှာ တွေ့ရပါတယ်. ဒါကြောင့် shift+[ ကိုရိုက်ပါတယ်. ကျန်တဲ့စာလုံးလေးတွေကို ဆက်တိုက်ကြိုးစားရိုက်ကြည့်ပါ. အခက်အခဲမရှိနိုင်ပါဘူး. ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ရိုက်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ပါဋ္ဌ်ဆင့် ရိုက်နည်း ကဲ. မေတ္တာဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးနားကို ရောက်လာပါပြီနော်. ပါဋ္ဌ်ဆင့်ကို စရိုက်ပါတော့မယ်. A =ေR = မ W = တ “မေတ” ဆိုတာထိ ရပြီနော်. တ၀မ်းပူ နောက်တစ်လုံးရိုက်ဖို့အတွက် ကီးဘုတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ “w” ဆိုတဲ့ ကီးလေးရဲ့ ညာဖက်အောက်နားမှာ တ၀မ်းပူ နောက်တစ်လုံးတွေ့ရပါတယ်. ဇော်ဂျီကီးဘုတ်မှာ ရှင်းပြထားတာက လက်ယာဘက်အောက်က စကားလုံးကို ရိုက်မယ်ဆိုရင် Tide+Key (သို့) Ctrl+Alt+Key လို့ ပြောထားပါတယ်. ကဲ. ဆက်ရိုက်မယ်နော်. မေတ ဆိုတာပြီးသွားရင် နောက်ထပ် တ၀မ်းပူကို ဒီလိုရိုက်မယ်. ~ + w = တ္တ M =ာမေတ္တာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး ပေါ်လာပါပြီ ခင်ဗျား ဒါဆိုရင် ကျန်တဲ့ ပါဋ္ဌ်ဆင့်စကားလုံးလေးတွေကို စမ်းရိုက်လို့ရနိုင်ပါပြီ. ခု ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာတွေက key တစ်ခုစီမှာ ရှိတဲ့ ပုံမှန် အက္ခရာကို ရိုက်နည်း၊ Shift ခံပြီး အပေါ်က အက္ခရာကိုရိုက်နည်း၊ ညာဖက်အောက်နားမှာ ရှိတဲ့ အက္ခရာကို ~ key ခံပြီး ရိုက်ယူနည်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ညာဖက်အပေါ်က အက္ခရာကို ဘယ်လိုရိုက်မလဲ ဆိုတာကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်. “ဃရာဝါသ၊ သမ္ဗာဓဖြင့်၊ ဒုက္ခဖွဲ့နှောင်၊ လူတို့ဘောင်ဝယ်၊ အိမ်ထောင်ညွှတ်ကွင်း၊ သံချိုင့်တွင်းမှ၊ ရှင်းရှင်းလွတ်စင်၊ တောချောင်ဝင်၍…” ကဲ. ဒီစာပိုဒ်လေးကို ရိုက်ကြည့်ရအောင်. Shift+C = ဃ ကျန်တာတွေ ဆက်ရိုက်လို့ရပါတယ်. Key ၏ ညာဖက်အပေါ်မှ အက္ခရာကို ရိုက်ယူနည်း “သမ္ဗာဓ” ဆိုတာကိုရိုက်မယ်နော်.0= သ R = မ ဒီထိရတာက “သမ” ပဲ ရှိသေးတယ်. “ဗ” ကို “မ” အောက်မှာ ပေါ်ဖုိ့ ရိုက်မယ်. ကီးဘုတ်မှာ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ အောက်ဆင့် “ဗ” က “A” Key ရဲ့ ညာဖက်အပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ်. အဲဒါကို ဘယ်လိုရိုက်ယူရမလဲဆိုတော့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်မှာ ပြောထားတာက Ctrl+Shift+Key (သို့) Shift+Tide+Key လို့ ပြောထားပါတယ်. ဒါကြောင့်မို့… “သမ” လို့ ရိုက်ပြီးရင် Ctrl+Shift+Alt+A =္ဗ ဆိုပြီး ရိုက်ယူလိုက်ပါမယ် ခင်ဗျား အခုထိ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာကတော့ ဇော်ဂျီကီးတစ်ခုစီမှာ ရှိနေတဲ့ အက္ခရာ လေးခုကို ရိုက်ယူနည်းတွေပါပဲ. ပြန်ပြီး အနှစ်ချုပ်ပြောပါမယ်. ပုံမှန်အက္ခရာအတိုင်း ရိုက်ချင်ရင် သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ ကီးကို ရိုက်ယူပါ. လက်ဝဲဖက်အပေါ်က အက္ခရာကို ရိုက်ချင်ရင် Shift+ Key ကို ရိုက်ယူပါ လက်ယာဖက်အောက်က အက္ခရာကို ရိုက်ချင်ရင် ~+Key (သို့) Ctrl+Alt+Key ကို ရိုက်ယူပါ. လက်ယာဖက်အပေါ်က အက္ခရာကို ရိုက်ချင်ရင်တော့ Shift+~+Key (သို့) Ctrl+Alt+Shift+Key ကို ရိုက်ယူပါ. ဒီထိရမယ်ထင်ပါတယ်. ကဲ. တစ်ချို့ ခက်ခဲမယ်ဆိုတာလေးတွေကို အစမ်းရိုက်ကြည့်ကြရအောင်. “မဇ္ဈိမ” ဆိုတာကို ရိုက်ကြည့်ပါ. ဒီလိုရိုက်ပါမယ်. R = မ Shift + Z = ဇ Ctrl+Alt+Shift+N =္ဈD =ိR = မ ရပါပြီနော်. ဒီစာပိုဒ်လေးကို ရိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့တတ်ကျွမ်းမှုကို စစ်ဆေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား... “မသိတတ်ဘိ - မောဟသိလော့၊ အဟိရိက - မရှက်စွတည့်၊ နောတ္တပ္ပမူ - မလန့်ဟူ၏၊ မှတ်ယူပျံ့လျက် - မငြိမ်သက်ထ - ဥဒ္ဓစ္စနှင့်၊ လောဘသဘော - လိုချင်ဟော၍၊ မှားသောအမြင် - ဒိဋ္ဌိတွင်သား၊ မာနကားမူ - ထောင်လွှားကြွတက်၊ ဒေါသတွက်ကြောင့် - ခက်ခက်ထန်ထန်၊ ဣသာလျှံမူ - လွန်ငြူစူ၏။ ပြောထူမစ္ဆေ - ၀န်တိုလေသတဲ့၊ တစ်ထွေမှတ်ကြ - ကုက္ကုစကား၊ နောင်တတစ်ဖန် - ပူပန်ထန်ပြင်း၊ ထိုင်းခြင်းထိန၊ မှိုင်းမိဒ္ဓနှင့်၊ ဗုဒ္ဓစသည့်၊ ယုံမှားဘိမူ - ၀ိစိကိစ္ဆာ၊ ဆယ့်လေးဖြာသည်၊ မှန်စွာ အကုသိုလ်ချည်းတည်း။” (နှာ - ၁၃၊ “ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ”၊ ရှင်ဇနကာဘိဝံသ) “ဣသာ” ကို ဒီလိုရိုက်ပါ. Ctrl+Shift+4 = ဣ O+M = သာ “ကုက္ကုစ” ကို ဒီလိုရိုက်ပါ. U+K = ကု U = က Shift+U =္ကShift + K =ုP = စ အဲလောက်ပဲ ခက်မယ်ထင်ပါတယ်. ကျန်တာတွေတော့ ကြိုးစားရိုက်ကြည့်ကြပါ. မရှင်းတာရှိရင် ကော်မန့်မှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်. ချစ်ခင်လေးစားလျက် ရန်အောင်
From…..http://mmbloggershelpdesk.blogspot.com/search/label/Zawgyi%20Fonts Читать статью
ကျွန်တော်တို့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးပြုပြင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီ Tools လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလစ်တစ်ချက်နဲ့တင်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်နှာက အမဲစက် တွေ အချိုင့်တွေ နဲ့ တခြား မျက်ကွင်းညိုတာကအစ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိန်းကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ မျက်တောင်အတုထည့်ပေးတာက အစ ပါဝင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ 19.008 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ဗျာ။ ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ.။
http://www.mediafire.com/?kcwwn1axg63epla . From…..http://www.nayminmaung.info/2012/03/arcsoft-perfect365-11012.html Читать статью
Advanced SystemCare Pro 5.2.0.223 Опубликовано 16.03.2012
ကျွန်တော် ဒီလိုကောင်လေးတွေ အရင်က လည်း အများကြီး တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုနောက်ဆုံးထပ်ထွက် လာတဲ့ Update လေးဖြစ်ပါတယ်။ Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ OS တွေကတော့ Microsoft® Windows®7(32-bit and 64-bit) Starter/ Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate ,Microsoft® Windows® Vista (32-bit and 64-bit) Starter/Home Basic/Home Premium/Business /Ultimate ,Microsoft® Windows® XP (32-bit and 64-bit) with SP2/SP3 or Home/Professional/Media Center,Microsoft® Windows® 2000 စတဲ့ OS တွေကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ သူ့ရဲ့ Features လေးတွေကိုလည်း ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 30.6 MB ပဲရှိပါတယ်.။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။. သူ့ရဲ့ Features လေးတွေကတော့ .....................
စတာလေးတွေကို ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ် လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ.။။
Latop မှတစ်ဆင့် Wifi လွင့်ချင်သူများ အတွက် Опубликовано 15.03.2012
ကျွန်တော် အရင်ဆုံး အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Connectify Pro v3.25 ကို Full Version လေးရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမယ် ဆိုတာကို အရင် ပြောပြပေးပါမယ် .. အရင်ဆုံး Connectify Pro v3.25 ကို မိမိတို့ Share ပေးချင်တဲ့ လက်တော့မှာ Install လုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Connectify Pro v3.25 ကိုမဖွင့် ပါနဲ့အုံး .. ကျွန်တော် အထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Patch File လေးကို My Computer >> Local Disk ( :C ) >> Program ထဲမှာ ရှိတဲ့ Connectify ဆိုတဲ့ Folder ထဲမှာ ထည့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Patch File လေးကို Right Click ထောက်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Run as administrator နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Patch ကိုနှိပ်ပြီး Patch ချိုးပေးလိုက်ပါ .. ကျွန်တော် အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့လည်း ပြပေးထား